ငါးခူနှင့်သီးရွက်စုံဆန်လှော်ဟင်း ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
Friday, May 02, 2014 Taunzalat
ငါးခူ....................... ၂၅ ကျပ်သားတစ်ကောင်
ပထမဆုံးငါးခူကို အကျိအချွဲ တွေကုန်စင်အောင်..မန်ကျည်းရည် ဖြင့်ဆေးကာ
၃ ပိုင်း ပိုင်းကာငါးငံပြာရည် ၊ ဟင်းခတ်မှုန်.တို.နယ်ကာပြုတ်ပေးပါ။
ငါးပြုတ်ရည်ထဲသို. ကြက်သွန်ဖြူ နုပ်နုပ်စဉ်း ၊ ဆန်လှော်မှုန်.တွေထည့်ပါ။
ငါးငံပြာရည်(ဆား) ၊ ဟင်းခတ်မှုန်. ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန်. တို.နှင့်အရသာသွင်းပါ။
တွေထည့် ကာ ချက်ချင်းသုံးဆောင်ပါ ။
( အရွက်တွေဝါသွားအောင်ထိအပူမပေးရန်သတိပြုပါ )
Posted in: အသားဟင်းများ